Kooxda barafka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka Alpine Ski Team
Ciyaaraha fudud ee Minnetonka Skippers
Salaan Skippers Alpine skiers iyo qoysaska oo aan ku soo dhaweyno xilli ciyaareedka 2020-21! Fadlan calaamadee jadwalkaaga taariikhaha taariikheed ee muhiimka ah ee xilli-ciyaareedka:
Shirka Waalidka / Ciyaaraha Fududeeyaha Jiritaanka
Nofeembar 2deeda, 2020 • 5:30 iyada oo loo marayo Kooxo
Kafateeriyada Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waxaan dib u eegi doonnaa yoolalka barnaamijka, tababarka iyo jadwalka jadwalka, xulashada kooxaha, waxaana ka jawaabi doonnaa wixii su'aalo ah. Intaa waxaa dheer, waxaan dib u eegi doonnaa khidmadda diiwaangelinta iyo tilmaamaha iibsashada dharka kooxda.
Kooxda loo yaqaan ' Minnetonka Alpine Race Team' waxay ka kooban tahay wiilasha iyo gabdhaha varsity varsity iyo kooxda varsity junior. Ma jiro wax xad u leh cabirka kooxda iyo xirfadle kasta oo lagu soo dhoweynayo waxqabadka oo dhan. Kooxdu waxay ku tababartaa Hyland Hills Talaadada, Arbacada iyo Khamiista fiidkii saacadda 7-da ilaa 9-da fiidnimo, Diseembar illaa horraanta Febraayo. Tartanka xilli-maalmeedka caadiga ahi wuxuu bilaabmaa dhammaadka Diseembar wuxuuna dhammaadaa horraantii Febraayo.
Xirmada macluumaadka oo dhameystiran oo ku saabsan barnaamijka oo ay ku jiraan jadwalka, khidmadaha diiwaangelinta, heerka kartida loo baahan yahay iyo qalabka ayaa la heli karaa adigoo gujinaya HALKAN .
Hadaad jeceshahay inaad hesho cusboonaysiinta kooxda, fadlan iimayl ugu dir macluumaadkaaga xiriirka (emaylka iyo taleefanka gacanta) dgartner@ecs-sales.com .
Waxaan rajeynayaa xilli fiican.
“ Waxaan tababarayaa in aan ka caawiyo ciyaartooyda in ay ku guuleystaan isboortiga iyo nolosha iyada oo la adeegsanayo talo bixin iyo bixin tusaalo wanaagsan”
liiska jadwalka diiwaangelinta kooxda
Tababaraha Tababaraha (Wiilasha & Gabdhaha):
612 991 9515
Ciyaaraha fudud ee dugsiga sare /